I-eyelash extension extension, izithombe zangaphambi nangemva
Ubuhle nempilo Ukunakekelwa ebusweni
Isandiso se-eyelash ejwayelekile - konke okudingeka ukwazi mayelana nenqubo
I-lashmeykery efanelekile iqala ukusebenza ngokufunda izinto eziyisisekelo. Inqubo eyinhloko yokwandisa ubukhulu nobude be-cilia yi-classic, ngezinye izikhathi ebizwa ngokuthi i-1D noma ivolumu eyodwa egcwele. Le nqubo inhle kwabesifazane abanquma ukuqala ukugcizelela ukubukeka nokuvakashela inkosi.
Uyini umehluko phakathi kwesandiso se-eyelash classic kusuka ku-2D?
Okubalulekile kobuchwepheshe obubucayi buhlanganisa ukunamathela ngokucophelela kwezinwele zokwenziwa kwendalo. I-cilia ngayinye ifakwe eyodwa yokufakelwa. Ukuze uqonde umehluko phakathi kwalendlela kanye namanye amasu, kubalulekile ukuhlola ngokucacile ukukhuliswa kwe-eyelash ye-classic kanye ne- 2D- ukubonisana kubonisa ukuthi ngevolumu egcwele kabili imibono iba ngaphezulu evulekile futhi ecacile. Lokhu kutholakala ngokufaka izintambo ezimbili zezinwele ze-polym kuya komunye wemvelo.
Izandiso ze-eyelashi ezindala zinamathuba azo:
ngokugcizelela kakhulu ukuqhutshwa kwekhulu leminyaka;
akazitholi izinwele zakhe;
masinyane kwenziwa, angabi ngaphezu kwamahora angu-2.5.
Izinhlobo ze-eyelash extension classic
Inketho yemvelo kakhulu futhi eyamukelekayo yokugqoka nsuku zonke yindlela yenqubo yaseYurophu. Lolu hlobo lokuxhaphaza lusiza ukugqamisa amehlo ngokuphumelelayo, kodwa kubonakala njengokwemvelo ngangokunokwenzeka, abantu abakuzungezile ngeke baqagele ukuthi i-cilia ingabonakali. Ngesikhathi sezinyanga zokwenziwa zokwenziwa kwamasayizi ahlukene zihlanganisiwe, kuye ngokuthi indawo yangakini nobude bakho.
Kukhona isandiso se-eyelash esiyingqayizivele nesithandwa kakhulu - umphumela we- fox . Izingxenye zokufakelwa zezinhlobo ezingu-3 zikhethiwe ngenqubo: emfushane, ephakathi futhi ehlangene. Izintambo ezincane ze-polymer zihlanganiswe emaceleni angaphakathi. Medium yakhelwe ukugqamisa ingxenye ephakathi yekhulu leminyaka. Izingxenye zezinwele ezinde kunazo zonke zakha izingxenyana zangaphandle zamehlo.
Ezinye izinhlobo zokuxhaphaza:
I-rarefaction. Izinduku ezimfushane nezinkulu zihamba ngenye.
Umsila wesigwegwe. Ubuqhawe budalwe yizicucu ezincane eziphakathi. Ezingxenyeni zangaphandle zamehlo kufakwe cilia ende kakhulu.
Ukubukeka kwamapopi. Yenziwa ngezintambo ezinkulu ze-polymer.
I-Multicolor. Esikhundleni sezinto ezimnyama, ama-shadow shade ajwayelekile, ukuhlanganiswa kokuphambene kusetshenziselwa.
Isandiso se-eyelash classic sibheka ukuthini?
Umphumela ngemuva kokuba inqubo yezithokozi incike kwifomu ekhethiwe. Uma uhlola isithombe ngaphambi nangemva kwesandiso se-eyelash classical, esenziwe ubuchwepheshe beYurophu, ungabona ukwanda okukhulu kwevolumu nokunyuka okuncane ngobukhulu bezinwele. Uhlaka lwekhulu lugcizelelwe kahle, njengokungathi kuncane okuhlulekile. I-Cilia ibheka i-fluffy ne-twirled, kodwa njengemvelo.
Umphumela we-fox ubuye ubukeke wemvelo, kodwa ukubukeka kubonakala kube kubi kakhulu, ngobuqili. Ngenxa yokwanda kancane kancane kwezinduku ezisuka ekhoneni elingaphakathi kuya kwangaphandle, ukufakwa kwamehlo kusondela eduze kwe-amygdala. Ukusebenzisa lobu buchwepheshe kusiza abesifazane ukuba bafihle ezinye zeziphambeko, babuke ngokuqondile isimo sejwabu leso eliphezulu.
Ngezansi, ungabona esithombeni isandiso se-eyelash esinezinye izinhlobo:
Indlela yokwenza isandiso se-eyelash classic?
Ukukhwabanisa okuchazweyo kulula - kungukubheka izinwele ezivela kwi-polymer kuya emvelweni. Inqubo yezingcingo ze-eyelasitiki zakudala idinga ukunamathela ngokuqinile emithethweni eminingana:
Inwele ngayinye yemvelo ifakwe iplastiki eyodwa.
Le ndaba ibambelela ku-cilia, hhayi esikhumbeni. Ibanga elivela ebusweni bejwabu leso ngu-0.5-1 mm.
Amagceke anamathiselwe ngokwehlukana komunye nomunye, aphelele ngokuzimela.
Ngenwetshiwe ye-classic, i-eyelash ihlanganiswe kusuka esiteji kuya phakathi. Ukutshala kufanele kube namandla.
Ebusuku bokusebenzisa i-resin, ihlise ngokuphelele isikhumba.
Ubude be-eyelashes ekwakheni
Leli pharamitha lixoxwa ne-lashmaker ngaphambi kokuqala kwenqubo yezimonyo. Unkosikazi onolwazi uzokuchaza ngokuningiliziwe ukuthi ungakhetha kanjani ubude be-eyelashes ngenkathi ukwakha ngendlela efanele, kuzosiza ukwenza isinqumo ngokuhambisana nalokhu okulandelayo:
izifiso zomuntu ngamunye;
ubukhulu bezinwele zakhe;
ukuguqulwa okufisa kwezingubo;
Isandiso se-eyelash e-classical, esibheka ukubukeka kwemvelo (ubuchwepheshe beYurophu), idinga ukunamathiselwa kwezinwele zokufakelwa zamasayizi ajwayelekile, okuyi-8-12 mm. Izinguqulo ezitholakalayo zokwakha zokwenziwa zokwenziwa - kusuka ku-5 ukuya ku-18 mm. Ngokwemvelo ephezulu leshmeyker isebenzisa izinhlobo eziningana, kuye ngokuthi indawo yenduku enamathele e-polymer.
Ubuningi bama-eyelash wokwakhiwa kwe-classical
Isibonisi esicatshangelwe sikhethwe ngabanye iklayenti ngayinye. Ukulinganisa okujwayelekile, ukunikeza ivolumu oyifunayo, kodwa hhayi cilia yemvelo enzima kakhulu - 0.1-0.15 mm. Kwezinye izimo, leli pharamitha lingancishiswa noma landa. Uma izinwele zakho zihlambalaza futhi zibuthakathaka, kungcono ukuhlanganisa izinketho ezibucayi kakhulu. On cilia yemvelo enamandla futhi enamandla kunconywa ukuba fasten izintambo ezinkulu. Awakwazi ukulimaza izinwele zemvelo, kodwa kuzokwenza ukuba zibukeke zikhudlwana futhi ziluhlaza.
Ubukhulu buxhomeke kumphumela okhethiwe. Uma udinga ivolumu eyodwa yama-classic - izandiso ze-eyelashi zenziwa nge-polymer enezimiso ezijwayelekile. Ukubukeka kwe-fox, i-squirrel kanye ne-puppet, izingxenye ezibanzi nezixubile zokwenziwa komsebenzi zifaneleke kakhulu. Umphumela we-rarefaction ufinyelelwa ngokuhlanganisa imicu ejulile neyincinci yobukhulu obuhlukene.
Izimfihlo ze-eyelash extension class
Inqubo ethunyelwe inikeza umqondo wekhnoloji elula futhi esheshayo, kodwa idinga ikhono, isipiliyoni esihle kanye nesitifiketi esiphakeme se-lashmaker. I-eyelash extension e-classic ejwayelekile ingenziwa ngokwazi okungaqondakali kwenqubo:
Ngaphambi kwezinwele ze-gluing kubalulekile ukunquma kusengaphambili isiqondiso sabo esihlala njalo. Kumele kube ngokufanayo okufanayo kwe-cilium ngayinye, kufanelana nomugqa wokukhula wemvelo.
Ama-fibre ahlangene ndawonye awavunyelwe. Uma izinwele ezilodwa ziphuma, ngokuqinisekile ziyokhipha umakhelwane ngemuva kwayo.
Isandiso se-eyelash ejwayelekile sidinga ukuguquka ngezikhathi ezithile ze-adhesive resin. Ukudonsa ukudonsa kulungiswa njalo ngemizuzu engu-15-20.
Phakathi nenqubo yokuqinisa, kufanele uhlanganise njalo uchungechunge olunebhayisikili ekhethekile ukuvimbela ukunamathela.
Indawo ngayinye ephathekayo ingcono ngokumiswa ngopeni noma i-fan, lokhu kuthuthukisa ukugcoba.
Isandiso se-eyelash classic sihlala isikhathi esingakanani?
Isikhathi esincane sokugqoka izinwele zezinwele zokwenziwa, ngisho nangaphandle kokunakekelwa kahle - amasonto amathathu. Uma ulandela izincomo zomshini wokushisa, ungalimazi impahla ye-polymeri, ungayifaki emswakama, ukulala ngemuva kwakho, umphumela we-classic we-eyelash extension uhlala isikhathi eside, cishe izinyanga ezingu-1.5. Ukulungiswa okwesikhashana kuzosiza ukwandisa le nkathi. Ngokuvakashelwa njalo kwi-master cilia eyisikiwe ugcine izinyanga ezintathu.
Ungasusa kanjani izandiso?
I-Cyst of izinyo - izimbangela kanye nezindlela ezintathu zokwelapha
Umaski ovela emgodini obusweni obuvela emanzini nasezindaweni zeminyaka - 5 zokupheka best
Kuperoz ebusweni - izimbangela kanye nokwelapha
Ingabe kufanelekile ukwandisa i-eyelashes?
Ukushisa ngemuva kokukhipha izinyo
Ukuhlobisa amashiya nge-henna
I-Zaeda emaceleni omlomo - izimbangela kanye nokwelashwa kwazo zonke izinhlobo ze-cheilitis
Ukuzivocavoca kusuka e-chinini yesibili
Thrush emlonyeni kubantu abadala - izimpawu, ukwelashwa
Amafutha okukhula kwe-eyelash
I-peroxide ye-hydrogen ebusweni
Amaconsi ama-Eye Midratsil
Ukuthuthukisa incwadi ngezandla zakho
Igumbi lokulala nokulala ekamelweni elilodwa
Izingubo zezinkanyezi zikaFrank
I-Juniperum evamile - izindawo zokwelapha kanye nesicelo semithi yabantu
U-Angelina Jolie kanye nezingane banambitha ama-tarantulas nama-scorpions eCambodia
Mask of avocado ebusweni
Iphi i-cloudberry ekhula kuphi?
Yini ewusizo walnut?
Abasebenzi bezokwelapha esibhedlela babhekene neKay West
Ukwelashwa kwe-adnexitis - izidakamizwa
Inkukhu yezinkukhu iqala kanjani ezinganeni - izimpawu zokuqala
Indlela yokuqinisa imisipha yangemuva?
Ukudlulelwa kwezinsuku ezingu-10 zenyanga
Izandla ezivela emidlalweni yezingane